Guddoomiye Ciro oo war ka soo saaray doorashada Aqalka Sare ee maamullada qaar - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Guddoomiye Ciro oo war ka soo saaray doorashada Aqalka Sare ee maamullada...
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro oo ka hadlay arrimaha doorashooyinka ayaa rajo fiican ka muujiyey in laga gudbay isjiid-jiidkii mudada soo taagnaa ee hir-gelinta doorashada, maadaama ay Kismaayo Khamiistii la soo dhaafay ka dhacday doorasho uu goobjoog ka ahaa.
Guddoomiye Ciro oo la hadlay VOA ayaa yiri, “Doorashadii waata ka bilaabatay Jubaland, waxaana hadda kadib la sugayaan in hadba maamul goboleed ay u ka bilaabato, oo xildhibaano cusub ay soo baxaan, marka waxaa moodaa in jiitankii doorashada uu Khamiistii ku ekaa oo hadda toos loo guda galay hirgelinta doorashada.”
Sidoo kale guddoomiye Ciro waxa uu sheegay in hadda loo balansan yahay in maalmaha soo socda ay doorashada xubnaha kale ee Aqalka Sare ay ka bilaabato deegaanada dowlad goboleedyada dalka.
“Todobaadka koowaad ee bishan Agoosto ayuu qorshuhu ahaa in lasoo gabagabeeyo doorashada Aqalka Sare, waxaana hadda noo abaabulan in waqtigaas ay doorashada Aqalka Sare ay ku dhacdo oo maalmaha soo socda ay ka bilaabato xarumaha dowlad goboleedyada,” ayuu hadalkiisa ku sii daray guddoomiye Maxamed Ciro.
Jubbaland ayaa Khamiistii la soo dhaafay bilaawday doorashada Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya, halkaas oo lagu soo doortay afar Senator, waxaana dhiman doorashada ugu yaraan 50-Senator oo kale, kuwaas oo laga soo kala dooranayo xarumaha dowlad goboleedyada dalka.
Madaxweyne kasta oo dowlad goboleed waxa uu awood u heystaa in rabitaankiisu uu sameyn ku yeesho xubnaha ku soo baxaya doorashada senatorrada Aqalka Sare, sida laga ogaaday doorashadii ka dhacday Kismaayo iyo liiska murasharaxiinta u tartameysa kuraasta Aqalka Sare ee taalla K/Galbeed oo maalin ka hor Lafta Gareen uu soo gudbiyey.
Afarta Senator ee ku soo baxday doorashadii ka dhacday Kismaayo ayaa la sheegay in ay siyaasadda isku mowqif ka yihiin Axmed Madoobe, halka Lafta Gareen uu liiska musharaxiinta Aqalka Sare qalinkiisa uga reebay, ugu yaraan laba musharax oo isku siyaasad aysan aheyn, kuwaas oo kala ah, Xuseen Sheekh Maxamuud iyo Ilyaas Cali Xasan. Labadaan nin afartii sano ee lasoo dhaafay waxay ka tirsanaayeen Aqalka Sare, balse hadda tartanka waxaa ka reebay Madaxweyne Lafta Gareen.